စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲစွဲလမ်းမှုကိုခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု (2015) - Your Brain On Porn
စွဲလမ်းအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်း (2015) ကိုရိပ်မိစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏
ဤသည်ပိုမိုမကြာသေးမီနှင့်ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေးသားထားသောအရာအားလုံးကိုအစားထိုး - Grubbs သည်သူ၏“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သုတေသနပြုချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုသိုးမွှေးဆွဲနေသလား။ (၂၀၁၆)
အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းပြီးမွမ်းမံမှု - CPUI-9 နှင့် Moral Incongruence လေ့လာမှုများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အဓိကစာရေးဆရာ (Joshua Grubbs နှင့် Samuel Perry) တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အစီအစဉ်၏ဘက်လိုက်မှုများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ တရားဝင် ပူးပေါင်းမဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Perry, Grubbs နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှအခြားညစ်ညမ်းသော“ ပညာရှင်” များသည်ပါ ၀ င်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်၎င်းတို့၏ RealYBOP အသင်း ၀ င်မှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်“ အကျိုးစီးပွားပmembershipိပက္ခ” အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015 ဇန်နဝါရီ; 44 (1): 125-36 ။ Doi: 10.1007 / s10508-013-0257-z ။ EPub 2014 ဖေဖော်ဝါရီ 12 ။
Grubbs JB1, Exline JJ, Pargament KI, ချိတ်ဖြစ်မှု, Carlisle တို့ RD.
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုသည်ပင်ကိုယ်မူလအာရုံ၌ ပို၍ အာရုံစိုက်လာသည်။ ယခုလေ့လာမှုသည်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမနှစ်သက်လက်ခံမှုတို့သည်အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုအတွေ့အကြုံတွင်မည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ကြိုနမူနာများတွင်လေ့လာမှုနှစ်ခုမှရလဒ်များ (လေ့လာမှု ၁၊ N = 1; လေ့လာမှု ၂၊ N = 331) မှဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းမှုအကြားခိုင်မာသောအပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်တိုင်ဤရလဒ်များမှာဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အန predict တရာယ်ခန့်မှန်းသော်လည်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအကြားဘာသာတရားသည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအဆင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ web-based နမူနာ (လေ့လာမှု ၃၊ N = 2) မှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံကအလားတူရလဒ်များကိုဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဘာသာတရားသည်သက်ဆိုင်သည့် covariates များ (ဥပမာရိုချုပ်ချုပ်မှု၊ လူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်တုံ့ပြန်မှု၊ neuroticism၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း) ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပခဲ့သည့်တိုင်ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုအားကောင်းစွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သည်။ အချုပ်အားဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုကဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားကြည့်ရှုရန်စွဲလမ်းမှုအားကောင်းသည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများအကြားအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအဆင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
YBOP အားဖြင့် comments:
ပထမအချက်အနေဖြင့်မကြာခဏအသုံးပြုလေ့မရှိသောတစ်စုံတစ်ယောက်အားစွဲလမ်း။ မရဟုဆိုလိုခြင်းသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတွင်မမှန်ကန်ပါ (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Grubbs ၏ဘာသာရပ်များသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်) ။ သုတေသနပြီးသားအင်တာနက်ပြordersနာများ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှစ်မျိုးလုံး) သည်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိကြောင်း၊ arousal နှင့်ဖွင့်လှစ် applications များအရေအတွက်၏ဒီဂရီ အဆိုပါ porn ၏အမှုနှင့်ထဲမှာကစားဘို့ကစားနှင့်တွန်းအားအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုအတွက် ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၏ဖြစ်ရပ်.
ထို့နောက်ဘာသာရေးသမားများသည်လောကရိုးရာထက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောလူအများစုအကြား၊ အချို့သောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၎င်းသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” မဟုတ်ဘဲဖြစ်နိုင်သည် အမှန်တကယ် ယာနျဘာသာတရားကိုမှအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်, related ကြောင်းစွဲ။ ဒါဟာလှုပ်ရှားမှုပိုပြီး arousal စေသည်ဘုံချည် (အချိန်ကျော်ပြီးတော့အားကောင်းချိုမှုလမ်းကြောင်း) ဖြန့်ချိ dopamine ပမာဏကြောင်းပေါ်လာသည်။
ဒါဟာ dopamine ကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့လိင်ခံစားချက်တွေပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုလည်း dopamine ပေါ်ပေါက်။ ဤကိုးကားချက်များကစိုးရိမ်စိတ်သည်လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွစေသည်ကိုပြသည်။
http://psycnet.apa.org/ဂျာနယ်များ / abn / 92 / 1 / 49 /
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်က၊ မင်းက porn ကိုကြည့်နေတာဟာမင်းရဲ့ဖန်တီးသူကိုမင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိမ့်မယ်ထင်ရင်၊ အဲဒါကစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် လိင်နှိုးဆွ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို (cortisol, ဦး နှောက်၌ norepinephrine) ကိုတုန့်ပြန်မှုအားလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဖြစ်မှားယွင်းသတ်မှတ်သည်။ Activation လုပ်ခြင်း၏ခလုတ်သည်“ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော” အရာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်ပconflictိပက္ခများနှင့်စိုးရိမ်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး“ တားမြစ်ထားသော” စာရွက်စာတမ်းများကိုပိုမိုနှိုးဆွပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီမှာပါ။ မည်သည့် ဘာသာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲလိင်မှုကိစ္စကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်လိင်အလေ့အကျင့်သည်အလားတူပြproblemနာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတစ် ဦး တွင်အသေးအဖွဲညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မကိုက်ညီဟုထင်မြင်သည့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ Grubbs အတွက်ထိန်းချုပ်သည်အခြားအချက်များ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီနေ့အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည်ဖြစ်စေနေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုအားနည်းစွာတုန့်ပြန်နေကြသောကြောင့်ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ၊
တိုတိုတှငျကြှနျုပျတို့လုံးဝမနက်ဖြန်ဘာသာရေး, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေနှင့်အတူကွယ်ပျောက်လုပျနိုငျလျှင်ပင်အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ပြင်းထန်သောပြဿနာများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်လိမ့်မယ်။ (အစွန်းရောက်ပစ္စည်းနှင့်အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုအားဖြင့်မြှင့်တင်ရန်) ပြင်းထန်သော arousal ရိုးရှင်းစွာပင်ငရဲတစ်ဦးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအချို့ဦးနှောက်အဘို့သိပ်ဆွဖြစ်လိမ့်မည်။ တချို့က porn အသုံးပြုသူများကကွာခဏသုံးပါနှင့်နေဆဲအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်နိုင်သည် ဘာ သူတို့သည်ကြည့်နေကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အမင်းနှိုးဆွခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေခြင်းများကိုတွေ့ရှိရသည်။
စင်စစ်အားဖြင့်ဘာသာရေးမဟုတ်သောသုံးစွဲသူများသည်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပစ္စည်းများကိုညစ်ညမ်းစေသောညစ်ညမ်းသောပြagainstနာများမှအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားတွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ဘာသာရေးမဟုတ်တဲ့သုံးစွဲသူတွေဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်မရှိတဲ့အတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မကြိုးစားခင်မှာဘာသာရေးအသုံးပြုသူတွေထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
Grubbs et al သည်ဘာသာတရား၏အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေသောနောက်ခံ ဦး နှောက်ယန္တရားကိုဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုပါ။ “ မြင့်တက်လာသည့်နှိုးဆွမှု” ထက်“ ဘာသာတရား” သည်မှားယွင်းသောရုပ်ပုံကိုဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ (သူ့စကားပြန်တွေရဲ့လက်ထဲမှာ) ခင်ဗျားဟာဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းနေသမျှကာလပတ်လုံး၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအပြည့်အ ၀ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဝမ်းနည်းစရာမှာဤကဲ့သို့သောသုတေသနသည်ဒဏ္myာရီဆန်ဆန်“ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြreligiousနာရှိသောဘာသာရေးသမားများသာဖြစ်သည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်တွင်၊ ဘာသာရေးမဟုတ်သောလူအများစုတို့သည်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာမည်သူကမျှသတိမပေးသောကြောင့်သူတို့၏ကြီးထွားလာသောလက္ခဏာများကိုသတိမထားမိခြင်း (သို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း) ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဆေးကုသမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အပြည့်အဝစွဲလမ်းနေလျှင်ပင်သူတို့သည်“ ရှည်လျားစွာလျစ်လျူရှု” နေပြီး“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုမည်သည့်အခါမျှအစီရင်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ သူတို့၏ပြင်းထန်သောပြproblemsနာများ (ဥပမာ morphing လိင်အရသာ၊ အသုံးပြုမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ ED / တွဲဖက်သူနှင့်အော်ဂဇင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့) တတျနိုငျသ porn-related, များစွာသော Non-ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအဖြစ် ဆဲ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဖြစ်သည်ဟုမယုံပါနှင့် - သူတို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်သူတို့၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြperformanceနာများနှင့်အခြားပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများပပျောက်သွားသည်အထိဖြစ်သည်။ (အမှန်စင်စစ်၊ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများရှိသူအချို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကို အသုံးပြု၍ ပြင်းထန်သောလိင်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်သောကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုမကြာခဏသုံးနိုင်သည်။ )
Might Grubbs et al ၏ရလဒ်များကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာလူအများယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိနားလည်ရန် (သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်အလွန်အမင်းအကြောင်းကြားခြင်း) ရှိခြင်းအားဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ရှင်းပြသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အစက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချိတ်ဆက်ကြသည်။ ရိပ်မိစွဲလမ်းအကြောင်းကိုမေးသောအခါလာသောအခါရာခိုင်နှုန်း? ဘာသာရေးလူများသည်လည်းရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိကြသည်၊ ထို့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများကိုကြုံတွေ့ရခြင်း (၎င်းတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော)၊ (မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော) အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းကိုပိုမိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဘာသာတရားမဲ့သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ရန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုမစဉ်းစားကြပါ၊ သို့မှသာသူတို့သည်နံရံတစ်ခုသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုမခံရပါကသူတို့သည်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ဘာသာတရားသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်” ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လျှင်ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်တွင်ပါဝင်သူအများစုသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ငါတို့မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသောလူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောသောညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်၊ r / nofap, (နောက်ကျော 2012 အတွက်) မိမိတို့၏အဖွဲ့ဝင်များအားနေရာ၌ရှိနေသော်လည်း။ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် 60 +% Non-ဘာသာရေးခဲ့ကြသည် (23% ခရစ်ယာန်) ။
ထိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးမကြာမီတွင်“ ခရစ်ယာန် nofap” ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ r / nofap ရှိဘာသာရေးရာခိုင်နှုန်းသည်ယခုအချိန်အထိပင်နိမ့်သည်။ အသင်း ၀ င်နောက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ၁၁% သာဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူပြီးကတည်းက r / nofap တွင်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်တိုးများလာသည်။ ယခုအခါ 11K + အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီးဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိသည်။